Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Vivitar
Sawirada Dijital ah Aasaaska
Haddii aad dhibaato ku haysato meesha Vivitar-kaaga ah iyo kamaradda wax lagu rido, waxaad arki kartaa fariin khaldan, ama waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin halka kamaradu aysan bixin wax khayaali ah.
Fariin qalad ah oo ku saabsan sheyga ama sheyga adigoo isticmaalaya talooyinkan si aad u xallisid dhibaatada Vivitar dhibcahaaga iyo kamaradda dusheeda.
Kaarka Farriinta Khadadka buuxa / Faylka Muujinta Fariin qaldan
Haddii aad aragto mid ka mid ah fariimahan, waxaa laga yaabaa inaad haysatid kaar xusuus ah oo cusub oo aan ku jirin sawir iyo baahida loo qabo in la qaabeeyo. Haddii aad ogtahay in kaadhka xusuusta uusan buuxsameyn oo ay ku jiraan sawirro markaad aragto fariin qaldan, Vivitar kamerada kaliya ma awoodi karto inaad akhriso kaadhka xusuusta. Waxaad u baahan doontaa inaad qaabeyso kaarka. Kaliya iska hubi inaad sawir ka soo qaadatay kaararka ka hor intaadan u qaabeyn, sababtoo ah qaabayntu waxay tirtiri doontaa dhamaan faylasha ku yaal kaarka.
Haddii feylku uusan dabku demin, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bedesho dhowr goobood oo ku yaal kamaradda Vivitar. Marka hore, hubso in kamaraduhu aysan ku jirin qaabka "macro", taas oo sababi karta qaar ka mid ah sawirrada Vivitar si ay u damiyaan fiilada. Intaa waxaa dheer, fiilada ayaa laga yaabaa in gacanta lagaaga daayo iyada oo loo marayo raajada kamaradaha. Beddel goobaha xalka si aad u hesho "si toos ah" si aad u xaliso dhibaatadan.
Fariin qalad ah ee faleebaha / Fariin qalad ah E18
Fariimaha qaladka ahba labadaba had iyo jeer waxay had iyo jeer tixraacaan muraayada aan korin doonin. Isku day inaad xirto kamaradda, ka qaadida bateriga , iyo sugitaanka 10 daqiiqo. Markaad bedesho bateriga oo aad mar labaad garaacdid, muraayada ayaa laga yaabaa in ay u dheeraato. Haddii kale, isku day in aad hubiso in guriyeynta lafuhu ay nadiif tahay oo aysan ka jirin qaybo iyo xaraarad, labaduba waxay sababi karaan fiiqda. Waxa kale oo suurtagal ah in farsamooyinka lens-ka ku guuldareysteen, taas oo ah dayactir qaali ah.
Sawiradayda waa la waayay
Qaar ka mid ah kamaradaha Vivitar, haddii aadan haysan kaadhka xusuusta, kamaraduhu waxay si ku meel gaar ah u kaydisaa sawirada xasuusta gudaha. Markaad awooddo kamarad, sawirrada si toos ah ayaa loo tirtiray. Hubso inaad isticmaasho kaar xusuusin si aad uga hortagto dhibaatadan.
Haddii aad leedahay batoon yar oo leh kamarad Vivitar, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin badan. Kaamiradda ayaa laga yaabaa inaanay soo jeedin ama isma jeedin, xataa inkastoo aadan ku riixin badhanka. Haddii kamaradku isku dayayso inaad kaydiso sawir marka awooddu ay daal badan tahay, sawirka lama kaydin karo ama laga yaabo inuu jabiyo. Si degdeg ah u buuxi bateriga ama u beddel bamiyaha AA ama AAA isla markiiba si looga fogaado dhibaatooyinka waaweyn.
Qor khaladaadka la ilaaliyo
Iyadoo kaararka SD-ka , waxaad lahaan doontaa shaashad wax lagu qoro oo ku taal dhinaca kaarka. Hooska u beddel meesha "furfuran" si aad u oggolaato in kamaradku u qoro sawirrada mar labaad.
Haddii kamarad Vivitar uu sawirro sawirro badanaa u muuqda in ay bullaacad tahay, waxaa suurtagal ah in nidaamka autofocus ee kaliya uusan awoodin in uu shaqeeyo sida ugu dhakhsaha badan ee loo baahan yahay si loo abuuro muuqaal fiiqan. Isku day inaad ku cadaadiso badhitaanka badhkeed si aad uga hor tagto goobta marka ay suurtagal tahay, ka dibna markaa kamaradkuna si xoog leh u foojignaadaan, riix si buuxda ujirta.
Sawirkaygu si fiican uma muuqan
Nasiib darro Vivitar ma sameyso kamaradaha ugu weyn, taas oo ah mid ka mid ah sababaha ay u jaban yihiin marka loo eego noocyada kale ee kamaradaha. Sidaas darteed waxaa suurtogal ah in kamarad Vivitar kaliya aysan ku qori karin sawirada tayada aad filan karto. Ama haddii aad waligaa hoos u dhigtay kamarad , waxaa suurtagal ah in ay waxyeello u geysatay dhibcaha halkaasoo aysan sii wadi karin sawirada tayada aad u baahan tahay.
Kala xakee Kaararka Xusuusta ee SDHC
Bartilmaameedka iyo Diidmada Filimada
Dhibaatooyinka Gawaarida GE
Hagaha Wareegga Wareegga Cabirka
Maaraynta Canon Camera
Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Dhaawaca Ciladaha
Xallinta khardraha SD Memory Card
Intee inooga Joogsan Aad Aad U Baahan Tahay
Xallinta khilaafka sawirada sawirada
Sida Loo Gudbiyo Maktabadda iTunes ee Kombiyuutar Cusub
Speakers Outdoor Speakers
Waa maxay Barnaamijka?
Sida loo keydiyo PowerPoint 2010 Soo Bandhigida Faylasha PDF
Tiknoolajiyada Qalabka ah ee W8
10 Waxyaabaha Muhiimka ah ee ku saabsan New Apple TV
Sida loo Fiiriyo Webka PS Vita
Ku darida ganaaxyo qadiimiga ah si aad u jebiso sheekada bogga
Uncharted: Nathan Drake Collection waa PS4 Essential
Sidee loo tijaabiyaa heerkulka "CPU" ee heerkulka "CPU"
10ka Tv-yada ee ugu wanaagsan ee lagu iibsado sannadka 2018
Adeegsiga WiMAX Technology
Sidee loo Ciyaaraa Dabbaal-degidda (ka Fiican Adiga Haatan)
Caymisyada Caymiska bilaashka ah ee Windows, Word, iyo More
7 Qalabka GIF-ga ah ee GIF-ga ah ee loogu talagalay in lagu soo rogo fiidiyoow muusik ah
Sida Loo Helo Qofka Facebook Loo Isticmaalayo Cinwaanka Emailka